Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo - Durdur
Sideen kubilaabaa isticmaalka Streamular?
Si aad u bilawdo, waa inaad marka hore gujisaa badhanka "DIIWAANGELI / GELI" geeska kore ee midig, halkaas oo aad iska diiwaan gelin karto ama aad ka gali karto koontadaada durdur ee hadda jira.
Si aad isu diiwaangeliso, si fudud ugu soo gal aqoonsigaaga 'Twitch ID' iyo Password-kaaga. Kadib waxaa lagu weydiin doonaa inaad ansixiso jaritaanka adoo isticmaalaya koontadaada 'Twitch'.
Marka xigta, ka xulo 4 ama 5 danahaaga koox ka mid ah xulashooyinka sida Ciyaaraha, Muusikada, Bandhigyada Hadalka IWM. Waxaan u adeegsan doonnaa xulashooyinkaan inaan kugula mid dhigno kuwa raacsan danahaaga la midka ah mar haddii la hawlgeliyo qorshe.
Ugu dambeyntiina, waxaa lagu geynayaa Aagga Xubinta, halkaasoo aad ka dooran karto qorshe. Waad dooran kartaa qorshayaasheena Bilaashka ah, oo u baahan xoogaa shaqo gacan qabsi ah, ama qorshayaasheena Bixinta, oo si toos ah ugu shaqeeya 100% ka dib markaad iibsato.
FADLAN OGOW: Ma helno macluumaadkaaga soo galida ama ma lihin wax marin u ah koontadaada 'Twitch'. LAGAama baahna inaad na siiso lambar sir ah oo aad u isticmaasho koontadaada 'Twitch'. Waxaa lagaa doonayaa inaad xisaabtaada ku hayso Dadweynaha si aad u isticmaasho adeegyadeena.
Maxay tahay sababta aan ugu noqon karo xubin durdur ah?
Twitch waa aalad muhiim u ah dad badan maalmahan. Kordhintaada Dadka raacsan ayaa la cadeeyay inuu kordhinayo joogitaankaaga internetka, kaa caawin doono inaad ogaato iyo inbadan. Haddii aad si fudud u rabto inaad ku kordhiso waxqabadka boggaaga shakhsi ahaaneed ee 'Twitch channel', ama aad tahay xirfadle leh ujeedo gaar ah oo loogu talagalay kanaalkaaga 'Twitch channel', waxaan ku siin karnaa koritaan macquul ah oo waara si loo daboolo baahiyahaaga. Twitch waa mid ka mid ah jaaliyadaha ugu koritaanka badan ee khadka tooska ah leh in ka badan 15 milyan oo isticmaale maalinle ah.
Miyaad marin u heli kartaa macluumaadkayga gelitaanka koontada 'Twitch'?
MAYA! Markaad isqorto adeegeena, AANAN ku soo ururinaynin furahaaga 'Twitch password' bartayada. Waxaan si fudud kuugu baahan nahay inaad gasho boggaaga 'Twitch' ee bogga 'Twitch' si aad u isticmaasho adeeggeena. Wax kale ma jiraan! MA LEH wax xakameyn ah oo ku saabsan koontadaada. MA QAADI karno in koontadaada ay raacdo, ka baxdo, ku qorto ama ka faallooto kanaal kasta.
Qorshaha Tilmaamaha Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Qorshaha "Free Twitch Followers" wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku kasbato kuwa raacsan Twitch bilaash ah 12 saacadood kasta adoo raacaya tiro yar oo koontooyin la mid ah oo lagu badalayo bartilmaameedka, kuwa dhabta ah iyo kuwa cusub ee soo laabashada.
Tani waxay kaaga baahan tahay inaad gacanta raacdo oo aad xaqiijiso raac kasta. Markaad raacdo lambarka loo baahan yahay ee kanaalada kale ee 'Twitch channels', qorshahaagu wuu hawl galayaa oo taageerayaal cusub ayaa loo geyn doonaa kanaalkaaga Twitch 12ka saacadood ee soo socda. Waxaan xaqiijineynaa ficil kasta oo la raaco ah, markaa iska hubi natiijooyinka inay sax noqon doonaan. Waad dhaqaajinkartaa qorshe 12kii saacadoodba mar walbana waad sii wadi doontaa tan. Ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan tirada jeer ee aad dhaqaajin karto qorshaha bilaashka ah.
Qorshayaasha Raacitaanka Maalintii la Bixiyay
Qorshayaasha "Daily Followers" waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku kasbato kuwa raacsan Real iyo Bartilmaameedka 24-kii saacba mar si toos ah, adigoon dib u raacin koonto xisaab celin ah.
Qorshahani wuxuu u socdaa 100% si otomaatig ah, markaa markaad iibsato, dib u fadhiiso, nasato oo daawato taageerayaasha kanaalkaaga 'Twitch channel' oo maalin walba ku kordha xawaare dabiici ah, adigoon marna booqan Streamular markale!
FADLAN OGOW: Waxaad bilaabi doontaa inaad qaabisho kuwa raacsan kadib marka lacagtaada la helo iibsiga qorshaha. Gaarsiinta ayaa ku celin doonta 24-kii saacadoodba maalinti aad iibsatay. Waad joojin kartaa qorshahaaga wakhti kasta, iyadoo aan lagaa qaadin khidmadaha laalista.
Markaad iibsato qorshaha rukunka, otomaatig ayaa lagugu soo dallacayaa isla maalinta bil kasta. Haddii mar uun aadan u baahnayn rukumankaaga Streamular, si fudud noogu soo dir farriin adoo adeegsanaya bartayada nala soo xiriir Bogga waxaanan u dejin doonnaa koontadaada inuu dhacayo dhammaadka bisha aad hadda ku jirto. Haddii tusaale ahaan, aad iska diiwaangelisay 23-kii bisha, laakiin aad wax naga qorto inaad kansashay koontadaada 10-ka bisha xigta, waxaan u dejin doonnaa koontadaada inaan ka noqonno 13 maalmood ka dib, dhammaadka bisha aad hadda ku jirto. Haddii aad doorbidi lahayd joojinta degdegga ah, si fudud noo soo sheeg oo annaguna taas waan kuu samayn karnaa sidoo kale. Khasab kuguma aha inaad ka sii mid ahaato rukhsad muddo ah, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad na soo qorto markaad diyaar u tahay inaad kansasho. Kadib waan qaban doonnaa oo waxaan kuu soo diri doonaa farriin xaqiijin ah.
Goorma ayaan helayaa amarkayga "Adeegyada Abaal-marinta"?
FADLAN OGOW: "Adeegyada Premium" waxaa ka mid ah 1-jeer xulashooyinka iibsiga ee loogu talagalay adeegyada badan, sida "1000 Twitch Followers".
Dhammaan amarrada "Adeegyada Lacagta Lahaa" ayaa la bilaabi doonaa 24-72 saacadood gudahood ee wakhtiga wax iibsigaaga. Badanaa, amarkaagu wuxuu bilaaban doonaa waxyar kadib markaad dhammaystirto lacag bixinta, laakiin waxay kuxirantahay tirada adeegyada aad amartay, waxay qaadan kartaa 24-72 saacadood si aad uBILAATO gudbinta dalabkaaga, ka dibna maalmo kooban oo maalmo dheeri ah aad ku buuxiso.
Adeegyadan miyay iga mamnuuci doonaan Twitch?
Xaqiiqdii maya! Waxaan ku bixinaa adeegyada Suuq-geynta Bulshada qaab aamin ah oo had iyo jeer ku beddela cusbooneysiinta ay sameyso Shabakadda Warbaahinta Bulshadu. Aad ayey muhiim u tahay inaad adeegyadan ka iibsato adeeg bixiye sumcad leh. Waxaan bixinay adeegyadan sanado badan waxaanan khubaro ku nahay warshadaha. Xusuusnow, waxaad heleysaa waxaad kubixisay, marka hadaad aragto adeegyo aad qaali u ah, waxaad u badan tahay inaad hesho wax aan amaan u aheyn astaantaada.
Adeegyadan miyay ka tagayaan Kanaalkayga?
Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan soo bandhigno adeegyada ugu tayada sareeya ee la heli karo. Mararka qaar isticmaaleyaashu waxay furi doonaan kanaalkaaga haddii aysan xiiseyneyn waxyaabahaaga. Waxaan ku dadaalaynaa inaan is waafajinno kanaallo kale oo ay jeclaan lahaayeen. Haddii aad iibsatay mid ka mid ah "Adeegyada Lacagta ah", marwalba waan buuxin doonnaa haddii dhibic jiro. Haddii aad soo iibsatay "Kuwa Maalinlaha ah ee Twitch", dib uma buuxinayno adeegyadan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in tayada wanaagsan ee kanaalkaaga iyo waxa ku jira ay yihiin, natiijooyinka wanaagsan ee aad arki doonto.